U-Evan Javier, uMbhali kwiBhloko yeNtengiso yePropathi-yokwenyaniWW:
Archives Umbhali: U-Evan Javier
ezaposwa ngomhla Matshi 19, 2020 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: Mar 19, 2020 07: 14
Enye yeengenelo zetapethi yendlela elula ngayo. Njengoko bekhethekile kwaye belungele ukuthenga kwiiyunithi ezincinci, kulula ukuzigcina, ukuhambisa kunye nokuphatha. Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo iithayile zekhaphethi | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Matshi 12, 2020 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: Mar 12, 2020 11: 52
Izixhobo zoKwakha: Izinto eziphambili kuKwakhiwa koMgangatho
Ukuqhubela phambili kwicandelo lezakhiwo nobunjineli kuye kwenza kwalula ukwakha izakhiwo eziphakamileyo ngexabiso eliphantsi. Iinkampani ziyandisa amashishini abo kunye nokwakha iindawo zeofisi kumazwe ahlukeneyo kunye nemimandla. Kwaye ngombulelo kwiiprojekthi zezindlu ezifikelelekayo nezihlangeneyo kwihlabathi liphupha, iphupha labantu lokuba namakhaya abo laba yinyaniso. Nangona, ngaphandle iimpahla ezikumgangatho ophezulu, akunakwenzeka ukuba kuqinisekiswe ubude bezinto ezakhiweyo, iindleko zibaluleke ngokulinganayo ukuze kugcinwe ukukhula okuzinzileyo kushishino.
Ngaba zeziphi izixhobo eziqhelekileyo zokwakha eziQhelekileyo?
Phantse zonke izinto zokwakha ziyafumaneka kwiivenkile zakho ezikufutshane. Zimbalwa kuzo ezingeniswa ngelixa ezinye zenziwa okanye ziveliswa ekuhlaleni. Kuxhomekeka kuhlobo lolwakhiwo, umgangatho womhlaba, kunye nezinye izinto ezininzi, umyili uyacebisa ngezinto eziyimfuneko.
1. Isamente, Udaka, kunye neClay
Ngokufanelekileyo eyona nto ibaluleke kakhulu kuzo zonke izinto njengoko zizithako ezisisiseko kwisakhiwo. Nganye yezi zixhobo ingasetyenziselwa kuphela ukwakheka, okanye ukudityaniswa, kunye nomlinganiso ngamnye uxhomekeka kuhlobo lwesakhiwo esithile. Ngelixa udaka nodongwe lusetyenziselwa izakhiwo ezincinci, ubukhulu becala ezilalini; Isamente isetyenziswa ikakhulu kwizakhiwo zekhonkrithi kunye nasezimbombeni. Isamente sisona sakha someleleyo kubo bonke.
Iifreyimi ziyadingeka ukubamba isakhiwo. Njengobungqingqwa kunye nobomi obude yeyona nto ibalulekileyo, ikakhulu iintonga zensimbi zisetyenziselwa izakhelo. Emva kofakelo lwesakhelo oluyimpumelelo, ikhonkrithi liyathululelwa ukuze kumiselwe ubume besiseko sesakhiwo. Iifreyimu zinokwenziwa ngamaplanga, ukungena okanye ukudibanisa iintonga zentsimbi, kwaye zinokusetyenziselwa ukunceda abasebenzi ukubeka phantsi izitena okanye ukwenza eminye imisebenzi emininzi.
3. Iibhloko kunye neeBhloko
Ubume besiseko kunye namgangatho bahlala benziwe ngekhonkrithi kunye neentonga, kwaye iindonga zenziwe ngezitena kunye neebhloko. Izitena zenziwe ngodongwe olomileyo ngelixa iibhloko zenziwe ngekhonkrithi. Kulula ukwenza udonga lwezitena kuneekhonkrithi kunye neentonga zentsimbi.
4. Iglasi, iiCeramics kunye neWood
Ngelixa ezinye izinto zokwakha zisetyenziselwa ukwakha kunye nokuqinisa isakhiwo, ezi zixhobo zisetyenziselwa ukuhombisa. Iglasi inokusetyenziswa kwiminyango nakwiifestile, iithayile kunye nezinto ezilungiswa ngokubanzi zenziwe ngezinto ezenziwe ngobugcisa, kwaye iinkuni zezona zinto ziphambili zefanitshala, iingcango kunye namanye amacandelo okuhombisa.
Thenga izinto ezisemgangathweni zokwakha ezisemgangathweni
Kwisakhiwo esiya kwizizukulwana ezizayo, kufuneka kusetyenziswe izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni. Izinto ezingafunekiyo zinokubangela ukuba isakhiwo siphuhlise ngokulula imifuno kwaye ngenxa yoko asinakukwazi ukumelana nemozulu embi njengoko ixesha lihamba. Ngaphezu koko, iya kufuna ukulungiswa rhoqo kunye nokulungiswa. Ke ngoko, ukuthenga eyona nto ibaluleke kakhulu yokwakha kubalulekile kwiprojekthi yokwakha. Ngapha koko, umthengisi unokuba luncedo olukhulu ekumiseleni ixabiso lezinto ezifunekayo ukugcina iindleko.
Fumana Zonke izibonelelo zolwakhiwo kwindawo enye
Zonke iintlobo zezinto zokwakha, kubandakanywa, ukufakelwa, iplasitiki, ukubekwa eceleni, ukwenziwa kweziphathamandla, izixhobo zokwakha kunye nobumba, zingathengwa kumthengisi omnye. Nangona kunjalo, ufuna ukuthenga kubathengisi abathengisa iimveliso zangempela kunye neziqinisekisiweyo. Ngoku, ngokuxhomekeka kuhlobo lweprojekthi, imfuno yoncedo inokuhluka. Ngelixa ulwakhiwo oluthile luya kufuna ukusetyenziswa okubanzi kwamashiti e-acrylic, iglasi, kunye neephaneli zokhuni, ezinye zinokufuna ubonelelo olungephi lwezixhobo ezinjalo. Nokuba ithini na impahla, zonke izinto zoncedo ezisisiseko, oomatshini eziphambili kunye nezixhobo zinokufumaneka ngexabiso elinokufikeleleka, ngokusekelwe kumthamo we-oda yakho, kwaye ungazenza ziziswe kwindawo oyifunayo ngexesha elifutshane. Iiwebhusayithi ezisebenzisa i-intanethi zibonelela ngazo zonke izinto ezifunwayo phantsi kophahla olunye kwizaphulelo ezikhulu; ke akukho mfuneko yokuba wena okanye inkampani yakho uthenge ngeenxa zonke okanye unxibelelane nabathengisi abahlukeneyo kuyo fumana iimpahla zodidi oluphezulu. Kulula ukubeka iiodolo kwi-Intanethi okanye ngokutsala umnxeba ngokuchofoza nje okuncinci kwegundane lakho.
exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu | ephawulweyo iimpahla zokwakha | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla January 23, 2020 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: UJan 23, 2020 08: 46
Yintoni onokujonga ngayo ngelixa ukhetha umboneleli weNkonzo yokuBumba?
Ukhe wahlangabezana nemicimbi yenkqubo yokuntywila kwekhaya lakho okanye eofisini? Ukuba ubona ubuncinci bezitenxo ngokwendlela yokuhambisa amanzi, kwimeko leyo, kuya kufuneka ukuba uqhagamshelane nabanikezeli beenkonzo zee-plumbing service. Imingxunya evaliweyo okanye inkqubo engamanzi yempompo ingqina iyangqubeka ngamanye amaxesha. Ke ngoko, ukuze uqiniseke ukuba indawo yakho icocekile kwaye icocekile iyagcinwa, kubalulekile ukuba unxibelelane nababoneleli beenkonzo zemibhobho yokulungisa imicimbi. Ngombulelo, kwezi ntsuku kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo ezikhoyo kwimarike xa kuziwa kwiinkonzo zokupaka.
Ngokubhekisele kwinkonzo yemibhobho echaphazelekayo, kufuneka yenziwe rhoqo; kabini ngonyaka ubuncinci, ukuze uqiniseke ukuba inkqubo yokuntywila kwendlu yakho okanye yeofisi kukwimo efanelekileyo. Awusoze wazi xa kunokubangela iingxaki kuwe. Ukufumana inkqubo yakho yokujonga amanzi ihlolwe rhoqo kuya kuqinisekisa ukuba akukho zimpazamo, kwaye ukuba kukho nakuphi na, banokuchongwa kwaye balungiswe ngexesha elifanelekileyo. Njengoko bekutshiwo, zininzi iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo ezifumanekayo kwezi ntsuku ukuya kuthi ga kubanini baboneleli beenkonzo. Ngoko ke, kunokuba kakhulu lula kuwe ukufumana engcono. Nangona kunjalo, kukho isibini kwimiba ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo phambi kokuba ukhethe enye. Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo inkonzo imibhobho, inkonzo yeemibhobho Drummoyne | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla January 10, 2020 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: UJan 10, 2020 10: 34
Skip Hire Services: Izinto eziluncedo kunye nezinto eziluncedo
Namhlanje iinkonzo zokuqesha zibaleka zikhona kuzo zonke iintlobo zeemfuno. Nokuba kungabucala okanye nakuphi na ukusetyenziswa kwezorhwebo, iinkonzo zokuqesha ngokutsiba zinokufumaneka ngokulahla inkunkuma. Ngokwesiqhelo, i-skips isetyenziswa ngamashishini okanye ngabantu abaphinda ukwakha okanye ukulungisa indawo enkulu, ngaloo ndlela bevelisa inkunkuma eninzi. Ekuqaleni, sazise ezinye iziseko malunga nenkqubo yokuqesha.
Amanqaku aphambili malunga neNkonzo ye-Skip Hire:
Imibutho ebonelela tsiba iinkonzo zokuqesha Isiseko sokufaka imigqomo emikhulu okanye ukutsiba ngaphakathi okanye ngaphandle nje kwendawo yakho, ngokokuthanda kwakho. Ungalahla yonke inkunkuma eveliswe kwesi sithuba. Nje ukuba umda wokuzalisa ufikelele, ukutsiba kuya kuthathwa ngabanikezeli beenkonzo kwaye inkunkuma iya kulahlwa kusetyenziswa iindlela eziphambili zesayensi.
I-Skips ziza ngobukhulu obahlukeneyo kwaye kufuneka zikhethwe ngokweemfuno zakho. Unokukhetha ukusuka kwi-mini, i-midi, i-maxi okanye i-skips yendawo yokusebenza, ngokuxhomekeke kwinani lezinto zenkunkuma onazo.
Iinkonzo zokuqeshisa ukutsiba ziye zafumana ukuthandwa okukhulu kumaxesha akutshanje ngenxa yendlela yabo eco-friendly yokuvuselela inkunkuma kunye nokunciphisa ingxaki kubathengi
Izibonelelo zeSistimu yokuShiya iNgxelo:
Ungaqiniseka njengoko yonke inkunkuma iqhubana noochwephesha kwicandelo. Endaweni yokulahla ngokungafaneleki kumhlaba ovulekileyo, iinkqubo zokuqesha zihamba ngenkunkuma kwaye zamkele indlela enobuntu yokulahla inkunkuma.
Ukuphathwa kwendabuko kufuna ukuba uqokelele inkunkuma kwizikhongozeli ezahlukileyo okanye iingxowa okwethutyana. Emva koko, kuya kufuneka usebenzise imo yakho yangasese yezothutho ukuphatha ezi phakethi kwiinkonzo zokulahla inkunkuma. Ukuqesha inkonzo yokutsiba kungekuphela kokukusindisa ekuhluphekeni kunye nexesha, kodwa kunceda nasekunciphiseni iindleko zokuhambisa kunye neepetrol.
Unokukhetha kuluhlu olubanzi lweesayizi ezilingana neemfuno zakho. Uninzi lweenkonzo zokuqesha zinikezela ngothotho lwee mini, i-midi, i-maxi, kunye ne-skip level level. Oku kukunika ukuguquguquka okungaphaya kwaye akufuneki ukhathazeke ngokungalahli yonke inkunkuma kwindawo yakho.
Ngoncedo ukutsiba ngokukuko, ungazikhetha ukuba ztsiba ukufakelwa ngaphakathi kwendawo apho kwenziwa khona inkunkuma okanye ngaphandle kwayo ukuba kukho izithintelo zendawo. Ngale ndlela ufumana ukuba nolawulo olupheleleyo malunga nendlela yokulahla inkunkuma.
Ukungancedi kwenkqubo ye-Skip Hire:
Ukuqesha inkqubo yokuqesha kungasoloko unyusa iindleko zakho zokuqala zotyalo mali kwaye ube nzima kancinci epokothweni yakho ukuba usebenzisa ishishini elincinci.
Kwimeko apho ubuninzi benkunkuma encinci eveliswa rhoqo, kuya kuba lula ukukhetha inkqubo yokuphelisa yendalo endaweni yokuqokelela inkunkuma ngokutsiba ithuba elide.
Iinkonzo ezininzi zokutsiba zinqabe ukulahla inkunkuma ukuba izinto ezilahliweyo zinqamleza umda wokugcwalisa. Oku kunokubangela iingxaki njengoko inkunkuma ethile evelisiweyo inokuhlala ingafakwanga ngenxa yemigaqo-nkqubo yokuqesha inkampani.
I-Skips ifuna ubungakanani bendawo ethile. Ukuyibeka kwindawo kawonke-wonke njengendlela okanye indlela yendlela inokuphikiswa ngabantu bendawo ukuba awunandawo yaneleyo kwindawo yakho.
Kubalulekile ukujonga inkonzo yokutsiba ngokungaxhamli njengotyalomali oluvulela izibonelelo zakho kunye nokusingqongileyo. Ke, ngaphambi kokuba usebenzise indawo yokuqeshisa ngeemfuno zakho zokulahla, qiniseka ukuba uqhuba uhlalutyo olucokisekileyo lweemfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali, ekuqaleni. Emva koko, unokukhetha umboneleli ngenkonzo kwindawo yakho ngokusekelwe kudumo lwabo kwaye athi kuye kulunge kuyo yonke inkunkuma yakho yokulahla inkunkuma.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo ukuqasha ibhin, tsiba umqashi, tsiba ukuqasha | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Disemba 30, 2019 by U-Evan Javier
Gqi beliswa: I-Dec 30, 2019 12: 06
Iingcebiso ezibalulekileyo ngelixa Iinkonzo zokuhanjiswa kweepeyinti
Asinguye wonke umntu osikelelekileyo ngexesha lokuntywila ibrashi kwepeyinti entsha kunye nokufumana iindonga zothando lwabo. Uninzi lwethu kufuneka lubhenele kuncedo lweengcali ukufumana umzobo, i-motifs kunye noyilo ezindongeni. Ngelixa ukwenza izinto zangaphakathi zenziwe lula, ipeyinti yangaphandle iza neseti yemiceli mngeni. Kuya kufuneka ujonge uphahla kunye neendonga eziphezulu ezingenakufikeleleka. Awunakuba nazo zonke izixhobo zokwenza umzobo wenziwe ngokwako kwaye ke, kuya kufuneka ubambe iintambo kwiinkonzo zepeyinti.
Kodwa akwanelanga ukuqesha iinkonzo, kubaluleke ngokulinganayo ukufumana iinkonzo ezigqibeleleyo. Ngenye indlela, kulula ukuba umhlaba ungene engxakini ngokuqesha iikontraki ezingalunganga. Kodwa ezi ngcebiso ziya kukukhokela ngalo naliphi na ixesha ngexesha lokukunceda ukuba wenze eyonapeyinti efanelekileyo:
Fumana isicatshulwa: Unganqikazi ukucacisa ngemali xa uthetha ngeenkonzo zepeyinti zobungcali. Akukho monakalo wokwazi ukuba iyakubiza malini iprojekthi. Ngapha koko, ukuba ujonga kwipeyinti efanelekileyo yokupeyinta, uya kufumana isicatshulwa esifanelekileyo esiya kuba kufutshane nesichanekileyo. Ngale ndlela, awuyi kukufumanisa kunyanzelekile ukuba usebenze kunye nengcali yeeNkonzo zokupeyinta. Kwakhona, akuyi kunyanzeleka ukuba uchithe amandla akho enkcitho ukuze ulungele whims kunye nokuzonwabisa kwengcali.
Beka izinto zakho eziphambili: Uya kulindela okuthile malunga neenkonzo zokupeyinta kweengcali. Qiniseka ukuba uyithetha ngaphandle kunye neengcali. Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokuba ingcali inokucinga ntoni okanye igwebe ukhetho lwakho. Ngamanye amaxesha unokuba nombono wasendle kwaye uchwephesha unokuba neendlela zokukuphumeza. Thatha elo thuba. Kuya kuba namaxesha apho inokungasebenzi kwaye kuya kufuneka uhambe ngendlela yomhlungu. Kuzo zombini iimeko, yiba nemiyalelo yokubonisa ulindelo lwakho. Nokuba ngaba umfanekiso wenkcazo kwigumbi lokuncokola ngokungacwangciswanga kwimibono yamakhaya eyakhelwayo, yabelana ngayo nengcali.
Xoxa ngokweenkcukacha: Akukho nanye yeenkonzo ezilungileyo zokupeyinta oya kulibazisa ukwabelana ngeenkcukacha kunye nawe. Yindlu yakho kwaye uya kuhlawula umsebenzi wokupeyinta. Ke, uya kuba nomdla wokwazi ulwazi oluhlobo lokuba iprojekthi iza kuqala nini, iza kwenziwa njani, yeyiphi na ixesha elimiselweyo, njl.njl. Ke, kuya kufuneka ubandakanyeke kwincoko ngokusemandleni akho. Ngaphandle kokuba ubuze, awunakulindela iimpendulo. Ke, yakha i-rapport kwaye uzame ukusebenza kwiprojekthi yokupeyinta indlu kunye.
Jonga ezinye iindlela: Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa kuziwa kumbala, uyilo, iindlela, njl njl. Ezifumanekayo ngeenkonzo zokupeyinta. Ngamanye amaxesha abazi kwabelana ngezo ngcebiso njengoko bengahlawulwanga. Ngamanye amaxesha awabelani njengoko enexhala lokuba umnini khaya unokugatya izimvo okanye angabhukhi iinkonzo. Nje ukuba uqiniseke ngokuqesha iiNkonzo zokupeyinta, ungangena kubo ngokufumana izimvo ezifanayo. Ungaze wazi ukuba zeziphi izimvo ezinomdla ezinokuvela kwaye zikuncede ngomsebenzi onomdla.
Ukuba uza kulandela ezi ngcebiso zilula, uya kukufumanisa kulula ukusebenza kwezi nkonzo. Nokuba zikhona izinto eziqhwalelayo, awuzukufumana mngeni ukujongana nazo njengoko uza kuba nazo oqeqeshelwe umsebenzi weenkonzo zepeyinti.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo iinkonzo zokupeyinta, iinkonzo zokupeyinta iCarrum Downs | Ushiye uluvo |